Owamanqamu eCurrie Cup ungase ube ngoDisemba
KUQHILIKA izihlathi kwiSharks evuke ngesivuthevuthe seflyhalf yeBulls, uManie Libbock, okulindeleke abonakale emqhudelwaneni ozozishaya saCurrie Cup Isithombe: BACKPAGEPIX
INTATHELI YESOLEZWE | June 30, 2020
ABADLALI baseNingizimu Afrika kungenzeka babuyele ekuzilolongeni ngoMsombuluko ozayo bese ngo-Agasti beqala imidlalo yeCurrie Cup ethasiselwe ezosongwa ngoDisemba 12.
Nokho lokho kusesezithebeni zikahulumeni nabaphathi balo mdlalo.
Isikhulu esiphezulu kwiSharks, u-Eduard Coetzee, uthe "Akekho ongaba nesiqiniseko okwamanje", Uhulumeni wenza okusemandleni akhe ukulekelela umdlalo.
"Uhulumeni uphezu kwemizamo yokusitholela indlela... ukunyakaza kuyathembise impela,"kusho uCoetzee.
"Uma konke kuhlangana, sizoba noqhudelwano ozenza saCurrie Cup ethe xaxa nezovumela amaBhokobhoko ethu ukuba adlale."
Lo mqhudelwano ozothi awufane nokwenziwe yiNew Zealand nge-Aotearoa ne-Australia iqhamuka neSuper Rugby Australia, uzobandakanya amaqembu amane aseMzansi adlala kwiSuper Rugby bese kuba yiKings neCheetahs kanjalo neGriquas nePumas.
"Elethu ithuba lokubuyela ekudlaleni lizofika,"kusho uCoetzee, evuma ukuthi bagwinya amathe bebuka amaqembu aseNew Zealand edlala osekuqhubeke amasonto amathathu.
"Sibheke okuthe xaxa thina ... Bonke abadingakalayo banhlanganye ngakho sibuyela enkundleni, ngisho engabe kusho uktuhi asidlale kwi 'bio bubble' (ukuqoka isiyingi esisodwa okuzodlalwa kuso ngaphandle kwabalandeli)."
Sekuke kwaba neziphakamiso ukuthi amaqembu adlale esiyingini esisodwa kude namaziko eCovid-19 nokuveze amagama ezindawo ezinjengeNelspruit, Potchefstroom neKimberly.
Abadlali nabo sekunesikhathi bezilungiselela ukubuyela enkundleni.
Esekhuluma ngeSharks, uCoetzee uthe:
"Sesinamasonto amabili sihlola abadlali ukuthi baqatha ngokwanele yini ukudlala, abafana bangichazile kakhulu ngoba basesimeni esihle kakhulu; iningi labo basezingeni elifanayo lokuba fithi nabebekulo ngaphambi kokumiswa kweSuper Rugby kanti abanye bangaphezulu.
"Ihlombe elikhulu liya kubalolongi babo ngendlela abazikhandle ngayo ngesikhathi sikathaqa, naba abadlali badinga ukunconywa ... bakhombise ukunikela kakhulu."
Ngesikhathi kuvulwe iwindi lokuhwebelana ngabadlali nenhloso yakho obekuwukusiza amaqembu ehlise izindleko eivele neSA Rugby, iSharks ilahlekelwe ngabathathu kuphela nokunguLouis Schreuder, Tyler Paul noJean Schoeman.
Wona ahlomule ngeflyhalf yeBulls, uManie Libbock nesilomo samaSevens uWerner Kok, otheleka namuhla eThekwini esuka eKapa.
"Ukube lokhu kusifice esikhathini esingangonyaka lapho abadlali bethu bebengeneme khona, ngabe basishiye bonke. Iningi labo belinezicelo ezinhle kakhulu. Ngakho ihlombe kufanele liye kubaqeqeshi bethu ngokukwazi ukwakha isimo esijatshulelwa ngabadlali sibenze bafuna ukuba yingxenye yaso," kusho uCoetezee.
"Ngethemba ukuthi emasontweni ambalwa ezayo sizokwazi ukumemezela ukwelulwa kwezinkontileka ezizokwenza abalandeli nabaxhasi bethu bename."